तोडियो लाल किल्ला, तिलकले रचे इतिहास – Nepali Digital Newspaper
तोडियो लाल किल्ला, तिलकले रचे इतिहास
एक मतको अन्तरले वडाध्यक्ष बन्नबाट पालिखे वञ्चित
मनिता चाम्लिङ, धरान
धरानमा भएको मेयरको उपनिर्वाचनमा विजय हासिल गरेर नेपाली काङ्ग्रेसका तिलक राईले ०४६ सालपछिको धरानको लाल किल्ला नै तोडिदिएका छन् । निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी नेकपाका प्रकाश राईलाई २ हजार ७ सय ९५ मतको अन्तरले पराजित गरेर तिलकले इतिहास रचेका हुन् ।
कांग्रेसबाट विजयी राईले २६ हजार ७ सय ९ मत पाए भने उनका प्रतिद्वन्द्वी नेकपाका प्रकाश राईले २३ हजार ९ सय १४ मत पाए । मंसिर १४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा कुल ५५ हजार ११ मत खसेको थियो । धरानमा ९२ हजार ८ सय ५३ मतदाता थिए ।
यसैगरी वडा नं. ७ को अध्यक्षमा भने नेकपाका जीवनराज सुवेदी विजयी भएका छन् । उनले कांग्रेसका उम्मेदवार सुवर्णमोहन पलिखेलाई केवल १ मतले हराए । वडाअध्यक्षमा विजयी सुवेदीले ६ सय २१ मत पाए भने उनका प्रतिद्वन्द्वी पलिखेले ६ सय २० मत प्राप्त गरेका थिए । कांग्रेसले वडा नं. ७ को अध्यक्ष पदको नतिजामा असन्तुष्टि जनाउँदै पुनः मत गणनाको माग गरे पनि सहमति जुटेपछि नेकपाका अध्यक्ष विजयी घोषणा गरिएको थियो । विजयी दुवै उम्मेदवारलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत राधाकृष्ण उप्रेतीले सपथ ग्रहण गराएका छन् ।
विजयी घोषणा पश्चात् निकालिएको र्यालीले धरान नगर परिक्रमा गरेको थियो । र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै नवनिर्वाचित मेयर राईले धराने जनताको आशालाई निरासामा परिणत हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । धरानमा बढेको करलाई घटाउने बताउँदै धरान उप–महानगरपालिकालाई जनताले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउने समेत बाचा गरेका थिए । विजयी र्यालीमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य महेश आचार्य, डा. शेखर कोइराला, सीताराम मेहेता, मीनकुमार विश्वकर्मा लगायत हजारौँ प्रजातन्त्रवादी कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरुको सहभागिता रहेको थियो ।